Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » ECanada ukuvula imida kubahambi abagonyo ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelomoya ngeenqwelomoya ezithwele abakhweli ziya kuvunyelwa ukuba zime kwizikhululo zeenqwelo moya ezintlanu zaseCanada.
Urhulumente uzimisele ukuvula imida yeKhanada kubo bonke abagadi abagonywe ngokupheleleyo abagqibe ikhosi epheleleyo yokugonya kunye noRhulumente waseCanada owamkelwe iyeza kwisithuba seentsuku ezili-14 ngaphambi kokungena eCanada.
Bonke abahambi kufuneka basebenzise i-ArriveCAN (usetyenziso okanye i-portal yewebhu) ukungenisa ulwazi lwabo lokuhamba.
Bonke abahambi, ngaphandle kokuthintela inqanaba, basaya kufuna iziphumo zokuvavanywa kwangaphambili kwe-COVID-19.
Urhulumente we Khanada ibeka phambili impilo nokhuselo lwabo bonke abantu eCanada ngokuthatha indlela esekwe kumngcipheko kunye nendlela yokulinganisa ukuvula imida yethu kwakhona. Enkosi ngomsebenzi onzima wamaKhanada, ukunyuka kwamanani okugonya kunye nokuhla kwamatyala e-COVID-19, uRhulumente waseCanada uyakwazi ukuqhubela phambili ngamanyathelo emida ehlengahlengisiweyo.
Nge-7 kaSeptemba, 2021, ukuba imeko yesifo sasekhaya sihlala sihle, uRhulumente uzimisele ukuvula imida yaseCanada kubo bonke abahambi abagonywe ngokupheleleyo abagqibe ikhosi epheleleyo yokugonya nguRhulumente waseCanada-wamkelwe isitofu ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokungena ECanada kwaye abahlangabezana neemfuno ezithile zokungena.
Njengenyathelo lokuqala, ukuqala ngo-Agasti 9, 2021, Khanada Izicwangciso zokuqala ukuvumela ukungena kubemi baseMelika kunye nabahlali abasisigxina, ngoku abahlala eUnited States, kwaye bagonywe ngokupheleleyo ubuncinci iintsuku ezili-14 ngaphambi kokungena eCanada kuhambo olungabalulekanga. Eli nyathelo lokuqala livumela uRhulumente waseKhanada ukuba asebenze ngokupheleleyo amanyathelo ahlaziyiweyo emida ngaphambi kukaSeptemba 7, 2021, kwaye aqwalasele ubudlelwane obuninzi phakathi kwabantu baseCanada nabaseMelika.
Kuxhomekeke kwimida eyahlukileyo, bonke abahambi kufuneka basebenzise i-ArriveCAN (usetyenziso okanye i-portal yewebhu) ukuhambisa ulwazi lwabo lokuhamba. Ukuba banelungelo lokungena eCanada kwaye bahlangabeze iikhrayitheriya ezithile, abagonyo abagonyelweyo ngokupheleleyo akuyi kufuneka bababeke bodwa xa befika eCanada.
Ukuqhubela phambili ukuxhasa la manyathelo matsha, iThutho laseKhanada landisa ubungakanani beSaziso esele sikhona esiya eAirmen (NOTAM) esilawula iinqwelomoya zokukhwela abakhweli bamazwe aphesheya kwiinqwelomoya ezine zaseCanada: iMontréal-Trudeau International Airport, iToronto Pearson International Airport, iCalgary International Airport, kunye neVancouver International Airport.